Iindaba-Khetha inkqubo encinci yonkcenkceshelo, gcina yonke idriphu yamanzi!
Ukusukela ekuqaleni kwalo nyaka, iimveliso ezininzi zezolimo ezithunyelwa kumazwe angaphandle kwihlabathi liphela zithwaxwa yimbalela, ethe yanempembelelo enkulu kuqoqosho lwehlabathi.
Ngokomzekelo, iUnited States neBrazil ziye zathwaxwa yimbalela. Ingqolowa, umbona, kunye neembotyi zesoya ziye zathwaxwa yimbalela, nto leyo ebangele ukuba amaxabiso okutya abe mandundu ngakumbi. Ukongeza, iinxalenye zaseRashiya naseKhanada nazo zinengxaki yokushisa okuphezulu kunye nembalela. Amazwe aliqela abalulekileyo avelisa ukutya okuziinkozo kunye namazwe athumela ukutya okuziinkozo ajongene nengxaki yembalela.
Oku kufuna okufanelekileyo ngakumbi ukunkcenkceshela iindlela kunye nokunye ukunkcenkceshela ngqo iindlela, ezinokuvelisa ukutya okuninzi ngamanzi amancinci.
Ngokwezibalo, izikhukula zemveli ukunkcenkceshelaifuna i-60-80 m³ yamanzi kwi-acre yomhlaba, ukunkcenkceshela nge-sprinkler kufuna i-40-50 m³, kunye nokunkcenkceshela kwe-drip kufuna kuphela i-25-30 m³. Izibonelelo zokonga amanzi zicacile!
Kwiindawo ezinobushushu obomileyo nobuphezulu, cinga nokusetyenziswa konkcenkceshelo lokunkcenkceshela phantsi komhlaba (olunokunciphisa kakhulu ukulahleka komphunga, amanzi kunye nesichumiso zihanjiswa ngqo kwiingcambu, ngokusebenza okuphezulu; inokulawula ngokufanelekileyo ukukhula kokhula, ukunciphisa inani zokutshabalalisa ukhula, kwaye ube nobubele kwindalo; Iziphumo zokusebenzisa unkcenkceshelo lokunkcenkceshela phantsi komhlaba kubushushu obuphezulu nakwindawo yembalela kulungile kakhulu).
Nokuba kwiindawo ezinemvula eyaneleyo, usenokukhetha ukunkcenkceshela okanye inkqubo yokunkcenkceshela. Ukunkcenkceshela ngokuchanekileyo akukho lula njengokugcina amanzi, zininzi izibonelelo, ezinje:
1. Ukonga amanzi, ukonga umbane, ukugcina isichumiso, ukugcina abasebenzi, ukuchumisa kulula, yindawo efanelekileyo yokuxhasa iziqhamo nemifuno esemgangathweni ngaphandle kongcoliseko;
2. Lawula ubushushu bomhlaba kunye nokufuma ukunciphisa ukonakaliswa kwezinambuzane;
3. Gcina ulwakhiwo lomhlaba, uthintele ukuxinana komhlaba, kwaye ube nefuthe lokukhupha ityuwa;
4. Isityalo sikhula ngamandla, iziqhamo zilingana, kwaye iziqhamo ziya kwintengiso kwangaphambili. Imveliso inyuke ngaphezulu kwama-35%, yonyusa ingeniso yamafama.